ခွဲရေး Vs တွဲရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Science & Religion » ခွဲရေး Vs တွဲရေး	10
ခွဲရေး Vs တွဲရေး
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 20, 2015 in Science & Religion | 10 comments
. ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ထဲ က မောင်ဂီ ရဲ့ “သိပ္ပံပညာ နှင့် ဘာသာရေး” ကို ခွဲ ထားသင့်တယ်လို့ ပြော တဲ့ အဆို ကို ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ပို့စ်တစ်ခု ရေးဖို့ ဆွဲအား လုပ်နေတာ ။
ဒီနေ့ တော့ ကကြီးမိုက် ရဲ့ ကိုသစ် နားထဲရောက်နေတဲ့ သီချင်းလေး အကြောင်း မှတ်ချက်လေး ကနေ ရေးဖို့ တွန်းအား ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။ (ခွက်ဒစ် တူ အေပီကေ မမ ပို့စ်)
ဒီတော့ ဆွဲအား နဲ့ တွန်းအား ပေါင်းပြီး အချိန်လေး တစ်ချို့ ဖြုန်းလိုက်ပါဦးမယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီ အကြောင်း ရစ်ပြီး တော့ ဘီဘီစီ ရဲ့ Science Category ထဲ က ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။
အကြောင်းက Science Study တစ်ခု ရဲ့ လူတွေ မသေခင် အချိန်လေးမှာ ဦးဏှောက်ထဲ ဘာတွေ တွေးလဲ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာမျိုး တွေ ကို လေ့လာတဲ့ အကြောင်းပါ။
အဲဒီမှာ သေပြီလို့ ထင်ပြီး မှ မသေဘဲ ပြန်ရှင်လာ သူ တွေ ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပြီး စစ်တမ်းကောက် ထားတာ။
လူပေါင်း ထောင်ချီပြီး (အတိအကျ ပြောဖို့ အဲဒီဆောင်းပါးကို Bookmark မလုပ်ခဲ့ မိလို့) ရတဲ့ အထဲ က စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်း တဲ့ သူ တစ်ချို့ အကြောင်းပါ။
တစ်ချို့ က သေပြီလို့ ထင်နေချိန် မှာ ( မြန်မာ အယူ ဆို မျော နေတယ် ခေါ်မလား) သူတို့ အိမ်မက် လို တွေ မက် နေတာ တဲ့။
အဲဒီထဲ မှာ ဘုရားသခင် နဲ့ တွေ့လို့ စိတ်ထဲ အေးချမ်း ပြီး ပျော်လိုက်တာ လို့ ပြောတဲ့ သူ ရှိသလို ကြောက်စရာ လန့်စရာ တွေ မြင်ပြီး သွေးလန့် နေသူ တွေလဲ ရှိသတဲ့။
ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက် ကတော့ အဲဒီ အချိန်မှာ အခန်းထဲ ဖြစ်ပျက်နေတာ တွေ အားလုံး ကို မြင်နေရတယ်တဲ့။
သူ့နား ကို ရောက်လာကြတာ ဘယ်နှစ်ယောက် ဘယ်လို ပုံစံ တွေ လို့ ပြောနိုင်သတဲ့။
အဲဒီလူ တွေ က သူ နဲ့ အရင်က မသိတာ သေချာတဲ့ အပြင် သူ့ ကို ဘာတွေလုပ်ခဲ့ တယ်လို့ ပြောတာ တွေကလဲ မှန်နေသတဲ့။
. နောက် သူပြောတာ က သူ ရှိနေတဲ့ အခန်းထောင့် မှာ မိန်းမကြီး တစ်ယောက် က လာခဲ့ လို့ ခေါ်တော့ သွားမယ်လုပ်တော့ သူ့ ခန္တာကြီး က ကျန်နေတာ ကိုလဲ မြင်လိုက်သတဲ့။
ဒေမီမိုး ရဲ့ Ghost ရုပ်ရှင်ထဲ ကလို ဘဲ။
Study ကတော့ ရေရှည် မှာ ဘာကောက်ချက်ချ မယ် မသိ။
စိတ်ဝင်စားမိတာ က မသေခင်အချိန်ပိုင်းလေးထဲ အိမ်မက်လို မြင်ချင်ရာ မြင်သွားနိုင်တာ တော့ အသေအချာဘဲ။
စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းတာ တွေကို မြင်သူ နဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတာ တွေ မြင်ခဲ့ တဲ့ သူ တွေ ရဲ့ Lifestyle ဘာ ကွာ ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ သိချင်တယ်။
ဒီမှာ ဘာသာရေး လုပ်သူ/ မလုပ်လို့ကွာနိုင်တယ် လို့တော့ ဘောင် ခတ် မထားတော့ဘူး။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဘာသာရေး လုပ်တာ နဲ့ စိတ် ကို အေးချမ်းအောင်ထား မေတ္တာတရား ထားနိုင်တာ အချိုး မကျ ကြောင်း ကို သိခဲ့ပြီ မို့ပါဘဲ။
သေချာတာကတော့ အချိန်မရွေး ရပ်သွားနိုင် တဲ့ ဝင်သက် အတွက် ကိုယ့်စိတ်မှာ အချိန်မရွေး အညစ်အကြေး ကင်းနေဖို့ လိုတယ် ဆိုတာလေးတော့ အသိဝင်လိုက်မိတယ်။
အသိ သိ ရုံ သိနေ တဲ့ ဘဝ က နေ လက်တွေ့ ဖြစ် နေအောင် ကျင့်ဖို့ လိုနေသေးတာ ကိုလဲ မြင်မိတယ်။
အဲလို ကျင့်တာ ကလဲ ရွေ့လျား မှု မရှိတဲ့ ကျင့် နေတာ မဟုတ်ဘဲ ရွေ့လျား မှု ရှိ တဲ့ အကျင့် ဖြစ်ဖို့လဲ ကြိုးစား ဖို့ လိုနေတယ်။
မမ မျှ နေတဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ် ရဲ့ အရှုပ်ထဲ မှာ ရှင်းအောင်နေ ဆိုပြီး ငှက်ကလေး က ထိပ်မှာ နားနေတာ ထက် ပိုပြီး ရှုပ်ထွေး တဲ့ လောကကြီး ထဲ တကယ်တော့ သိပ်တော့ မလွယ်လှပေဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လောကကြီး ထဲ အထွက်မှာ စိတ်အေးချမ်းတာလေး တွေ မြင်ပြီးတော့ ဘဲ ထွက်ချင်ပါတယ်။
ဒီမှာ လာပါပြီ။ ကို့ယိုးကား အတွေး။
ဒီလို သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက် တွေ က နေ သေခါနီး လူ့ရဲ့ ဦးဏှောက် ထဲ အင်မတန် ကောင်း တဲ့ အာရုံ လိုမျိုး ချိတ်ဆက်ပြီး သွင်းပေး နိုင်ခဲ့ ရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိ။
ထောက်ခံမဲ့ သူကြီးမင်း ကို ပြေးမြင်လိုက် တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်သက်တမ်း အတွင်း ထွက်လာနိုင်ဦး မဲ့ အရာ မဟုတ်လေတော့ ….
သိပ္ပံပညာ ကို အားကိုးနေမဲ့ အစား ကွကိုယ် ဗုဒ္ဓ ရဲ့ တရား စစ် တရားမှန် လေး ကိုဘဲ နှလုံးသွင်းပြီး နံရံ ရဲ့ တစ်ခြား တစ်ဖက် ကို ကူးဖို့ ကြိုးစားတာက စိတ်အချ ရဆုံးပါ။
ဒီတော့ မောင်ဂီ ပြောသလို
“သိပ္ပံပညာ နှင့် ဘာသာရေး” ကို ခွဲဖို့ အကြောင်း ထောက်ခံ ရလေတော့ မလား ပါဘဲ။
.လောလောဆယ် မတော့ ရ ပြီ။
တရာ x 2။ lol:-)))
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မျော=လွင့်မြော
မယ့်= (အညွန်းစကား ) လုပ်မယ့် ပြောမယ့် နေ့ မယ့် သွားမယ့်
ကျနော်ကြားဘူးတာတော့ မသေခင် ဇောသုံးတန်ပြန်တယ်လို့။
အဲတော့ မသေခင်အချိန်လေးမှာ ကောင်းတာတွေလုပ်ထားသူက အသေဖြောင့် ညှင်ညှင်သာသာအသက်ထွက်
အချို့ မသေဘဲ မျောနေသူကတော့ သူစိတ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားသတဲ့
သေချာတာတစ်ခုကတော့ လက်တွေ့ (သိပ္ပံ)နဲ့ စိတ်တွေ့ (၀ိဇ္ဇာ) ကတော့ တစ်လမ်းစီးသွားနေကြသလိုပေမယ့်
သက်သေပြလို့ မရနိုင်ဘဲ ရှိတယ်လို့ လက်ခံ ထားရတာတွေက တစ်ပုံကြီး နော်။
သရဲ တစ္ဆေ နာနာဘာဝ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမှားပြင်တာပါကိုလတ်ကြီးရေ
မျော= လွင့်မျော စီးမျော
မြစပဲရိုး says: ကျေးဇူး ကိုပေါက်ကြီး။ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ :-))
. နောက်ဆို သိပ္ပံရှာဖွေမှု တွေ က နေ လူ့ဘဝ အဆုံးသတ် တစ်ခုခု ကို တွေ့လာနိုင်မယ် ထင်မိတာဘဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: AI ရုပ်ရှင် ညွှန်းတွေ ရေးဖို့
သေခြင်းတရားဆီ သူတို့ ရဲ့ ကို
တစွန်းတစ မြင်ရတဲ့ အခါ
ကိုယ့် သက်တမ်းမှ မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုကနေ အဖြေ တစ်ခု များး
ပို မြန်မြန် ထွက်နိုင်မလားးးလို့..
ကြားးထဲက ကွင်းးဆက်ကို ကျနော်တို့ မမြင်နိုင်သေးးဘူးးထင်ရဲ့
@QUIL@ says: အတော်လေး အမှန်တရားနဲ့ နီးစပ်လာပြီပဲ…
ဒါတောင် သေခြင်း တရား တခုပဲ ရှိသေးတာနော…
မွေးဖွားခြင်းတို့ ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်တို့ .. မျှခြေ တည်ရှိမှုတို့… မပြောရသေးဘူး
ခုထိကို ခွဲထားသင့်တယ်ပဲ မြင်မိသေးတယ်…
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သိပ္ပံပညာ တိုးတက် ထွန်းကားလာတာမှန်တယ်
သို့သော် တဖက်ကမ်း မခတ်သေးလို့…။ အဆုံးစွန်ထိ သက်သေမပြနိုင်သေးလို့..။
အဆုံးစွန်ရောက်တဲ့တနေ့တော့ .. ရှေးလူတွေ ၀ိဇ္ဇာနည်းတွေမှာ ဘာမှန်တယ် ဘာမှားတယ်
ဘာကိုလက်ခံ ဘာကို ပယ် ဆိုတာမျိုး လုပ်လာနိုင်တဲ့ တနေ့ တွဲကြတာပေါ့ဗျာ…
(နချရယ် တောင် လေ့လာ မကုန်သေးတာ ဆူပရာနချရယ် နဲ့ တွဲဖို့ အဝေးကြီး အဝေးကြီးရယ်)
ခွဲပါ ခွဲထားပါ ပြောနေတာက … တွဲထားလို့ ရလာမယ့် အကျိုးအမြတ်ထက်
တွဲထားမှ ပြဿနာတက်ဖို့ များတာ ပိုမြင်ရလို့ပါ..။ လက်ရှိအချိန် အနေနဲ့ ဖြစ်သည်။
လူဟာ မျောက်ကနေ ဆင်းသက်တယ် ဆိုတာ ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအ၀န်းအ၀ိုင်းတွေ က လက်မခံကြဘူးနော..
(သည်တွေ့ရှိချက်တောင် မျိုးဆက် ၃ဆက်မက ကြာခဲ့ပြီ)
ဘယ်ဘာသာရေးကမှ အာဒံ ဧ၀ ဆိုတာ ဖိန့်ဖိန့် ပါတို့ ..ဗြမာကြီး လေးဦး မရှိပါဘူးတို့
ဆိုပြီး ၀န်ခံ တောင်းပန်ပြီး ကျမ်းစာ ပြင်မရေးကြသေး။
မပြင်ရကောင်းလားဆိုပြီး ကျန်ဘာသာတွေက ၀ိုင်းပြောကြရင်လည်း ရန်ဖြစ်ကြယုံသာ။
ကိုယ့်ဘာသာ လာပြီးတော့ … ဟိုဘုရားသည်ဘုရား ကာဗွန်သက်တမ်း စစ်မဟဲ့ ဆိုလည်း
သည်က ဘာသာရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်သင့်ခံမယ်မဟုတ်။
(ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ် တွေလို့ ဆိုချင်ဆို – အများလက်မခံရင် မလုပ်ရတာ …. ဘာစနစ် တဲ့ တုန်း ဒကာမကြီးရဲ့ ???)
ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေးရှုရင် ခွဲထားတာ အကောင်းဆုံး။
အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘာသာရေးအယူအဆ အားလုံးကို သိပ္ပံပညာနဲ့ စောကျောဖို့ကပြည့်စုံမှု မရှိသေးလို့..။
ဒါပေသိ ..နာ့သင်းဂ် လာ့စ်ဖော်ရဲဗား ပါ.. တွဲလာနိုင်မယ့်နေ့ တနေ့တော့ ရောက်မပေါ့။
ပြောရရင် မကြာမီ ရောက် လာလတ္တံ့သော သဂျီး ပြောလာမယ့် ဘာကြီးကတော့ နှစ် ဘယ်နှရာ မခံတော့ဘူး ဆိုတာကိုလည်း
သိပ္ပံပညာ နဲ့ လုပ်တတ်သွားတိုင်း(လုပ်လို့ရတိုင်း) လုပ်မနေကြတာတွေ တပုံတပင်မဟုတ်လား။
ဆိုပါတော့ ကလုံး ကိစ္စ။ ကလုံး လုပ်တတ်တာကြာပြီ။ လူတွေ ဘက်ကပ် ရအောင် ဆိုပြီး ကလုံးတွေလုပ်
ဆေးစိမ်ထား။ တခုခုမကောင်းတော့ရင် ဖြုတ်လဲ။ လုပ်လို့ရပေမယ့်… ကျင့်ဝတ်အရ စည်း အရ
လူပီသမှုအရ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်မခံလို့ မလုပ်ကြဘဲ… သည်ဘက်ခေတ်ကျမှ ကလုံးတယောက် ဖြစ်သည်အထိမလုပ်ဘဲ
အချင်း၊ စတန်းမ် ဆဲလ် ကို ဆေးစိမ် လိုအပ်လာတော့မှ လိုတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ် ဆဲလ်ပွားယူပြီး ထုတ်လုပ်မယ်
ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ရတယ်မဟုတ်လား။ (အော်ဂင် နဲ့ ဇီဝ ကြား က ကွန်းဖလစ်အော့ဖ် အင်းထရက်စ်တွေ)
သည်တော့ အနာဂတ်မှာ တွဲရေးတို့ ပြောင်းလဲမှု ထွန်းကားမှု ပပျောက်မှု တို့ ဆိုတာတွေက
မှန်းတာထက် မြန်ချင်လည်း မြန်မပေါ့။ ကြာချင်လည်း ကြာသွားမပေါ့။ အဲ… ဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်လာမပေါ့လေ..။
ရှင်သန်မှု အဘိဓမ္မာ အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွက်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်ဘရယ် ယောက်ျား
မြစပဲရိုး says: အခုလောလောဆယ်မတော့ “အများလက်ခံရင်” “မလုပ်ရတာ” ကတော့ မြန်မာပြည် က ဒီမိုခွေစီစနစ် ပါ ဖျာ့
Ma Ma says: ရွေးကောက်ပွဲနီးတဲ့အချိန်မှာ ခွဲရေး တွဲရေး ဆိုလို့ ကြောင်ကြီးကိုတော့ ဆော်ဘီလို့ မှတ်နေတာ။ “သိပ္ပံပညာ နှင့် ဘာသာရေး” ဆိုတာ တချိန်ချိန်မှာ တပေါင်းတစည်းတည်းများ ဖြစ်သွားမလားလို့ ထင်မိတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းသိလာတာက ………….
သိပ္ပံပညာက သက်သေပြနေတာတွေဟာ မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကို သက်သေပြနေသလိုပဲဖြစ်ပြီး
သိပ္ပံပညာဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ တရားတော်တွေရဲ့ အပိုင်းအစမျှသာဖြစ်တယ်လို့။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သဗ္ဗူညုတဉာဏ်တော်နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ လောက်က တွေ့ရှိချက်တွေကို သိပ္ပံပညာက ဒီနေ့အထိတောင် တစ်ပိုင်းတစ်စပဲ ဖော်ထုတ်နိုင်သေးတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
(အဘိဓမ္မာသည် ဘုရားဟောမဟုတ်… စသည်ဖြင့် အငြင်းပွားလာမှာတွေ ကြို မြင်မိသေးးးး ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဘာသာရေးတွေ နိုင်ငံရေးတွေ မပြောလိုပေမယ့် ဘာသာရေးလုပ်တာ မလုပ်တာနဲ့ စိတ်အေးချမ်းမှုရတာ မဆိုင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
Mike says: .တကယ်တော့ ခေတ်မှီတဲ့ ယနေ့လူတော်တော်များများ .ဘာသာရေးကိုလွှတ်ချခဲ့ကြပါပြီ…အချို့ကတော့အားနာလို့
.ဘာသာမဲ့ဆိုသူတွေကိုပြောတာနော်…ဘာသာမဲ့ဆိုပေမဲ့ သူတို့ကမှ လူကို လူသားစစ်စစ်လို အမှန်တကယ်
.မိမိအတွင်းစိတ်ကလေးကိုသေခါနီးဘယ်လိုဖြစ်အောင် ညာလိုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပါ .ညာလိုလုပ်ပါတွေတော့ မပြောတတ်လို့မပြောတော့ဘူး Imagine there’s no heaven
ခပ်တည်တည်နဲ့ဝင်ရွှီးသွားပါဂျောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးသူများ
အားလုံး ကျေးဇူးပါ့။ :-)))